ဗန်နာတူနိုင်ငံ၌ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinopharm ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှု စတင် - Xinhua News Agency
ဗန်နာတူနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Bob Loughman နှင့် ဗန်နာတူနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Zhou Haichengတို့အား ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇွန် ၇ ရက် က ဗန်နာတူနိုင်ငံ၊ ဗီလာဆိပ်ကမ်းမြို့ ၊ အမျိုးသားကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ ၌ ကျင်းပသည့် တရုတ်နိုင်ငံ မှ လှူဒါန်းသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးလွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့်အခမ်းအနားတွင် အတူတကွ တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-- Chinese Embassy in Vanuatu/Handout via Xinhua)
ဆစ်ဒနီ၊ ဇွန် ၁၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဗန်နာတူနိုင်ငံ၌ ဇွန် ၁၅ ရက်မှ စတင်ကာ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinopharm ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှု စတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဗန်နာတူနိုင်ငံ Port Vila မြို့ရှိ အမျိုးသားကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌ ကျင်းပသည့် ကာကွယ်ဆေး စတင်ထိုးနှံခြင်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားအပြီးတွင် ဝန်ကြီးချုပ် Bob Loughman သည် Sinopharm ကာကွယ်ဆေး ပထမအကြိမ်ထိုးနှံမှု ခံယူခဲ့ကြေင်း သိရသည်။
ဗန်နာတူ ဝန်ကြီးချုပ်က ကာကွယ်ဆေးများ ပေးအပ်လှူဒါန်းသည့်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ ၎င်းကာကွယ်ဆေးများသည် ဗန်နာတူနိုင်ငံ ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုစတင်ရာတွင် အကူအညီပေးရန် အလွန်အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က ကာကွယ်ဆေး၏ ထိရောက်မှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုအား ထောက်ခံ၍ Sinopharm ကာကွယ်ဆေးကို အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုသည်။ ဗန်နာတူပြည်သူများအနေဖြင့် ပုံမှန်ဘဝကို တတ်နိုင်သမျှစောလျင်စွာ ရရှိစေရန်အတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူကြရန် ၎င်းက တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသည့် Sinopharm ကာကွယ်ဆေးများကို ဇွန်လအစောပိုင်းတွင် Air Vanuatu စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ဖြင့် သယ်ယူလာခဲ့ပြီး ဗန်နာတူနိုင်ငံသည် လှူဒါန်းမှုမှတစ်ဆင့် ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုး ပထမဆုံးလက်ခံရရှိသည့်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။
အခမ်းအနားသို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Silas Bule၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Johnny Koanapo Rasou ၊ တရားရေးဝန်ကြီး Esmon Saimon၊ ခရီးသွားလာရေး၊ကုန်သွယ်ရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ဗန်နာတူစီးပွားရေးဝန်ကြီး James Bule၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာဝန်ကြီး Bruno Leignkone နှင့် တရုတ်သံအမတ်ကြီး တို့ အတူတကွ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ (Xinhua)
China’s Sinopharm vaccine rolls out in Vanuatu
SYDNEY, June 15 (Xinhua) — China’s Sinopharm vaccine started to roll out in Vanuatu from Tuesday.
Loughman thanked the Chinese government for donating the vaccines, saying these vaccines will play an important role to help Vanuatu roll out its vaccination program and protect the people’s health and safety.
The China-donated Sinopharm vaccines, which were transported via Air Vanuatu’s charter flight in early June, are the first bilateral vaccine donation the Pacific Island country has received.
Minister of Health Silas Bule, Minister of Finance Johnny Koanapo Rasou, Minister of Justice Esmon Saimon, Minister of Tourism, Trade, Commerce and Ni-Vanuatu Business James Bule, Minister of Climate Change Bruno Leignkone and Chinese Ambassador to Vanuatu Zhou Haicheng also attended the ceremony. Enditem